Michael Grigsby si na Martech Zone |
Edemede site na Michael Grigsby
Ya mere, anyị na-achọ ịma mgbe ọ bụla marcom (nkwukọrịta ahịa) na-arụ ọrụ, dịka ụgbọ na maka mkpọsa nke mmadụ. Inyocha marcom ọ bụ ihe iji iji nyocha A / B dị mfe. Nke a bụ usoro ebe ihe nlele na-ejikọ mkpụrụ ndụ abụọ maka ọgwụgwọ mkpọsa. Otu cell na-enweta ule na cell nke ọzọ agaghị. Mgbe ahụ a na-atụle ọnụego nzaghachi ma ọ bụ ngbata n ’etiti sel abụọ ahụ. Ọ bụrụ na cell test ahụ karịa cell njikwa